baking soda inzuzo isobala. Isetshenziselwa hhayi kuphela ekulungiseleleni imikhiqizo confectionery. Ngokuvamile soda kungase kube yindlela kuphela ukuze akwazi ukuhlinzeka usizo lokuqala. Futhi akunakwenzeka kukhona umngenisi wezihambi, okuyinto ekhabetheni ekhishini kwakungeke iphakethe sodium Bicarbonate.
Soda Ukuphuza: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ekwelapheni isilungulela
Noma ubani oye wahlupheka kusukela isilungulela, uyazi ukuthi ezingemnandi emizweni izimbangela anda asidi we esiswini. Futhi uma enkingeni kuye kwenzeka kuwe, kanye nemithi edingekayo e nekhabethe lemithi wayengekho lapho, khona-ke ungasebenzisa iresiphi elandelayo. Ingcosana amanzi, engeza soda kancane (wezipuni wesithathu) baphuze isisombululo okuholela. Soda ngokushesha neutralizes le acid, futhi ngokushesha ngcono. Kodwa ngokuvamile ithuluzi ezifana ayikwazi ukusetshenziswa. Iqiniso lokuthi ekwamukelweni soda ku semali-carbon dioxide, nakho kubangela ukuvuvukala futhi wenza uketshezi nakakhulu juice esiswini.
Soda Ukuphuza: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ekwelapheni utshwala ukudakwa
Uma, ngemva ephathini olunesivunguvungu ozizwa ngayo, uma sikubeka kahle, hhayi kakhulu, lamanzi esiphethu kanye baking soda kungaba wusizo kakhulu. Ngo ilitha lamanzi esiphethu, chaza isigamu yokudlela baking soda. Isiphuzo gulp okuholela ingxube, ngemva kwalokho push empandeni ulimi. Ngakho you banga ukuhlanza futhi isisu iphume. Umonakalo lokhu inqubo kuyafana ekwelapheni isilungulela - ukucasuka odongeni esiswini.
Soda Ukuphuza: inzuzo kanye nokulimala ekwelapheni isifo sezinsini
Njengoba soda kuyinto isinqandakuvunda, ingasetshenziswa ekwelapheni ezinjalo izifo ezingemnandi ezifana stomatitis. Kuyadingeka ukuba uxubha isixazululo umlomo soda njalo ngemva kwamahora amabili kuze alulame ngokugcwele. Namanje kungenzeka ukwenza udaka of baking soda kanye namanzi kancane. Futhi lokhu mass gcoba ezindaweni ezithintekile. Ngo samuntu yesibili, ukwelapha isifo sezinsini kufanele uqaphele ngoba powder sodium Bicarbonate kungadala ezishile.
Soda Ukuphuza: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ekwelapheni ukukhwehlela
Lapho isifuba esomile, engeza efudumele ubisi isigamu isipuni soda. Lokhu imithi kuzosiza mncane out anqwabelene isikhwehlela bronchial, okwenza kube lula inqubo expectoration. Ithonya elibi soda kokungenisa kuchaziwe ngenhla.
Soda ngoba ukudla: uhlelo lokusebenza lwangaphandle
Bicarbonate Sodium powder kuwusizo olukhulu ekwelapheni ukulunywa yizinambuzane. Ukuze lokhu uhlanganise inani elincane soda ne amaconsi ambalwa amanzi. Lokhu amakhowe isicelo bite wasiqashisa ezomile. Enye soda kusiza ukusha elanga futhi ezishisayo. Lokwengeza amanzi abandayo, wathi umkhiqizo ukudla. Khona-ke moisten ikhambi futhi sisebenzise gauze endaweni ethintekile, usuphinda kuze ekunqanyulweni wokushisa isasasa.
Soda Ukuphuza: eziyingozi
Njengoba usulibonile, baking soda kungasiza ezimweni eziningi eziphuthumayo, uma akukho okunye ngakwesokunene akuyona. Kodwa ungakhohlwa ngezingozi lo mkhiqizo. Powder sodium carbonate - liphinyiselwe alikhali. Ngakho-ke, zigweme ukuthintana isikhathi eside ne soda isikhumba. Noma kunjalo, naphezu kweqiniso lokuthi soda neutralizes esiswini acid, isilonda baphuze isixazululo nge-sodium Bicarbonate is contraindicated. Hlala uphilile!
Zabesifazane amateki okusezingeni eliphezulu: lokho ukuhlanganisa